metal core ကို PCB - KingSong PCB နည်းပညာ, Ltd
With the increase of the LED chip size and polycrystalline LED the development of packaging design, LED the heat load are also redouble,in addition to this the heat dissipation capacity of plate material, its thermal stability of materials are also affect the LED products’ life.In short, high power LED products loading board material needs to have at the same time the characteristics of high heat dissipation and high heat resistance, so the packaging substrate material becomes the key factor, on the application of traditional LED heat dissipation substrate,သတ္တု Core PCB be widely used.
Metal core printed circuit board PCB (you aslo can call it MCPCB , Thermal PCB, အကြီးစားကြေးနီ PCB) အစားရက်ဖန်ခွက် FR4, FR3 သို့မဟုတ် others.There ၏သတ္တုအခြေစိုက်စခန်းပစ္စည်းနှင့်အတူ PCB ဘုတ်အဖွဲ့မျိုးဖြစ်ပါသည်, တဖက်သတ်တစ်ခုတည်းတဖက်သတ်နှစ်ဆနှင့် multilayer ဖြစ်ပါသည် ဘုတ်အဖွဲ့။ ၏ဆုံး Metal Core PCB manufacturers are commonly used metal core material is aluminum, copper and alloy. Aluminum is the most frequently used among them due to its good heat transfer ability,dissipation ability and relatively cheaper costs than copper,even which may hasabetter performance,so it widely was accepted.copper although have better performance,but its cost more expensive,steel is more rigid than both aluminum and copper,it has normal steel and stainless steel,but its thermal conductivity is lower than others,simple speaking,aluminum material is the best choice,even considering from cost,rigidness and thermal conductivity.
သတ္တု Core PCB ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိထိရောက်ရောက်ကွာအစိတ်အပိုင်းများကနေအပူငျ့သှားနိုင်စွမ်း၏ရိုးရာ FR4 သို့မဟုတ် CEM3 PCBs အစားထိုးအသုံးပြုသည်။ ဒါကအပူကူးမှု dielectric အလွှာကို အသုံးပြု. အောင်မြင်နေသည်။
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လျှပ်စစ်အထီးကျန်ထိန်းသိမ်းနေစဉ် prepreg dielectric, ခြေရင်းပန်းကန်ရန်သတ္တုပါးနှင့်အစိတ်အပိုင်းများထံမှအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အပူလွှဲပြောင်းပေးပါသည်။ ခြေရင်းလူမီနီယမ်သို့မဟုတ်ကြေးနီပန်းကန်ဟာ Single-တဖက်သတ်အလွှာဟာစက်မှုသမာဓိရှိနှင့်ဖြန့်ဖြူးပေးသည်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်လေထုတိုက်ရိုက်မျက်နှာပြင် mounting သို့မဟုတ်တစ်အပူစုပ်ဖို့အပူလွှဲပြောင်း။
သတ္တု Core PCB အင်္ဂါရပ်:
PCB circuit ကိုဒီဇိုင်းအတွက်အပူပျံ့နှံ့၏ထိရောက်သောကုသမှု
လည်ပတ်မှုအပူချိန်ကိုလျှော့ချ, ပါဝါသိပ်သည်းဆနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရတိုးမြှင့်, ထုတ်ကုန်၏ဘဝတိုးချဲ့
ပိုကောင်းတဲ့စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြာရှည်ခံမှုနှင့်အတူပျက်စီးလွယ်ကြွေအလွှာ PCB ကိုအစားထိုး
သတ္တု Core PCB applications များ:
အလင်းရောင်: LED အလင်းလူမီနီယမ် PCB ၏အကြီးမားဆုံးအသုံးပြုသူဖြစ်ပါသည်
ပါဝါ module: ပါဝါ converter, ပြောင်းပြန်လှန်, အစိုင်အခဲပြည်နယ် relays များ, ပါဝါ Rectifier တံတားများ
power supply: စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး, DC က / AC အ converter, SW ထိန်းညှိ switching
ဆက်သွယ်ရေးအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ: ကြိမ်နှုန်းမြင့်အသံချဲ့စက်, filter ကိုကရိယာ, transmitter ကိုဆားကစ်
audio ပစ္စည်းကိရိယာများ: input ကို, output ကိုချဲ့စက်များ, မျှမျှတတချဲ့စက်များ, အသံချဲ့စက်များ, preamplifiers, ပါဝါချဲ့စက်များ
ကွန်ပျူတာ: CPU ကိုပျဉ်ပြား, floppy disk ကို drives တွေကို, ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေ
Office ကိုအလိုအလျောက်ကိရိယာများ: မော်တာ drives တွေကို ...
Power က module: ပြောင်းပြန်လှန်, အစိုင်အခဲပြည်နယ် relays များ, ပါဝါ Rectifier တံတားများ
ကားတစ်စီး: အီလက်ထရောနစ်ထိန်းညှိ, စက်နှိုး, ပါဝါနဲ့ controller ...
လူမီနီယမ်, ကြေးနီ, သံအလွိုင်း
အပူအကငျြ့ (dielectrial အလွှာ):
0.8, 1.0,1.5, 2.0, MK / w 2.5,3.0
0.5oz, 6oz မှတက် 1oz,2အောင်စ, 3oz,
routing, လာကြတယ်, V-ဖြတ်
အဖြူ / က Black / အစိမ်းရောင်အပြာရောင် / / နီရေနံ
ဒဏ္ဍာရီ / Silkscreen အရောင်:
နှစ်မြှုပ်ခြင်းရွှေ, HASL, OSP
လေဟာနယ် / ပလတ်စတစ်အိတ်
လူပျိုတဖက်သတ် MCPCB နှစ်ချက်တဖက်သတ် MCPCB, COB MCPCB, multilayer MCPCB
Mfg Volumes ကို: